चियावालीलाई भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो ? विवादपछी गजेन्द्रले खोले सबै कुरा ! - समृद्ध नेपाल
चियावालीलाई भाइरल बनाउने प्लानिङ थियो ? विवादपछी गजेन्द्रले खोले सबै कुरा !
सामान्य व्यापार गरेर चिया बेच्दै गरेको मान्छे यस्तो चर्चा पाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ,यस्तो हुन्छ भनेर सपना पनि देख्या थिइन। यत्रो सबैनना दाजुभाइदिदीबहिनीआमाबुबाहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर खासै आशा पनि गरेको थिइन। यति धेरै माया गरिदिनुभएको छ।उहाँहरू सबैलाई मनदेखी नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
उहाँ बिहान राती तीन बजेदेखि नै आफ्नो बच्चा पिठ्युँमा बोकी चिया बेच्नुहुँदो रहेछ। उहाँको माइतीघरतिर दिदीबहिनीहरू भएतापनी घरपटी चाहिँ खासै कोहि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले सुनधारामा सानोतिनो ठेक्कापट्टा गर्नुहुँदो रहेछ।यद्यपि अहिले उहाँ श्रीमती र छोरी छोडेर पारीवारिक जिम्मेवारी विहीन भएर बस्नुभएको रहेछ। उहाँ घर पनि आउनुहुँदो रहेनछ। तर एक्कासि सामाजिक संजालबाट आफ्नो श्रीमतीको भाइरल समाचार आइसमेपछी उहाँले फोन चाहिँ गर्नुभएको थियो रे। यति धेरै दुख गरेर बसेको थाहा थिएन भन्नुभयो र रुँदै फोनमा कुराकानी गर्नुभएको रहेछ।उहाँले भन्नुभयो कि मेरो श्रीमानले अब घर फर्किन्छु त भन्नुभयो मलाई तर यस्तो दुखमा छोडेर जानुभएको छ अब म कसरी उहाँलाई स्वागत गरौं ? मलाई उहाँले यस्तो चोटमा छोडेर जानुभयो।मेरो त मनदेखी नै चित्त दुख्या छ। त्यो चोट अहिले तत्काल बिर्सिहाल्न नसकेको हुँदा अहिले नै हत्तपत्त स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ।
प्लास्टिकको छानो, परालको ओछ्यान, तर ‘जनता आवास’ पाउन प्रमाण पुगेन अब के चाहिन्छ सरकार !
३ दिनमा २ लाखबढीले छाडे उपत्यका !
पुरिएको २२ घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएका सोनिश यस्ता भए !
आफ्नो प्रेमिकाको बिहे केटीसँग नै गराईदिने प्रेमीको कथा । सबैलाई रुवाउने कथा !
काठमाडाैं छाड्नेकाे कहानी : कोठाको सामान आधा मूल्यमा बचेर हिडे !
‘सीधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले बल्ल मुख खोले !
उपहारमा पाएको मोबाइल आविष्कार केन्द्रको लागि महावीरले बेच्न !
काठमाडौंमा १० रुपैयाँमा छानी छानी कपडा किन्नेको भिड सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ।